Pokémon GO 0.131.3 Android အတြက္ Aptoide APK အား ေဒါင္းလုပ္ ျပဳလုပ္ပါ
ဗားရွင္း 0.131.3 လြန္ခဲ့ေသာ9လက
တစ်နှစ်တာကို Google Play ရဲ့အကြီးမားဆုံးအပေးအယူများနှင့်အတူနယူးအပေးအယူများကိုဖမ်း & ပိုကီမွန်!
- ထိုသို့သောပေါက်ဖွားနှင့်စတားပိုငျးပိုငျးအဖြစ်ပစ္စည်းများအပေါ်အထူးလျှော့စျေးနှင့်အတူအထူးသေတ္တာများ Get
- မူလ Sinnoh ဒေသကြီးအတွင်းရှာဖွေတွေ့ရှိသစ်ကိုပိုကီမွန်ဖမ်း
- ပစ္စုပ္ပန်-ပို့ပိုကီမွန် Delibird နှင့်အထူးပွဲလမ်းသဘင် Pikachu ရှာဖွေရန်
ပိုကီမွန် GO ယခုသင်တန်းပေးစစျပှဲ feature ကိုမိတ်ဆက်ပေးခဲ့သည်။ အနီးနားရှိအခြားလူ့အခွင့်အရေးသင်တန်းနှင့်တသားတ-on-one ပိုကီမွန်တိုက်ပွဲများခံစားကြည့်ပါ, ဒါမှမဟုတ်အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ခေါင်းဆောင်များ Spark, Candela နှင့် Blanche ဆန့်ကျင်အပြင်းအထန်လေ့ကျင့်! သင်တန်းဆရာစစ်တိုက်ရာတွင်ပါဝင်များအတွက်ဆုလာဘ်ဝင်ငွေနဲ့သုံးကွဲပြားခြားနားသောသင်တန်းပေးတိုက်ပွဲလိခ်၏တဦးတည်းအတွက်စိတ်လှုပ်ရှားစရာပိုကီမွန်ကျွမ်းကျင်မှုကိုချွတ်ပြသနိုင်ပါတယ်။
သူတို့ကသူတို့ကိုလှည့်ပတ်ကမ္ဘာကြီးကိုစူးစမ်းအဖြစ်ပိုကီမွန်ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့တာဖြစ်ကြောင်းသူကမ္ဘာလုံးအနှံ့လူ့အခွင့်အရေးသင်တန်းကို Join ။ ပိုကီမွန် GO သန်း 850 ကျော်ကြိမ်ဒေါင်းလုတ်လုပ်များနှင့် TechCrunch က Game Developers ရွေးချယ်မှုဆုပေးပွဲနှင့် "တစ်နှစ်တာ၏အကောင်းဆုံး App ကို" က "အကောင်းဆုံးမိုဘိုင်းဂိမ်း" အမည်ရှိထားပြီးကြောင်းကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာဂိမ်းအာရုံဖြစ်ပါတယ်။
- ဒီဇင်ဘာလ 4, 2018 အဖြစ်ပြန်ကြားရေးလက်ရှိ။
APK ဗားရွင္း 0.131.3
Release date: 2018-12-21 19:17:17